Amin'izao fotoana izao, manantena aho fa ho faly amin'ny fahafahanao manao fanandramana nomerika manokana ianao. Raha miasa ao amin'ny orinasa lehibe teknika ianao dia mety efa manao ireo fanandramana ireo amin'ny fotoana rehetra. Fa raha tsy miasa amin'ny orinasa teknika ianao, dia mety hihevitra fa tsy afaka mandefa dingana dizitaly ianao. Soa ihany fa diso izany: miaraka amin'ny famoronana kiritika sy ny asa mafy, ny tsirairay dia afaka mitantana dingana dizitaly.
Ny dingana voalohany dia manampy amin'ny fanavahana ny dingana lehibe roa: manao izany na miaraka amin'ny mahery. Ary misy fomba vitsivitsy vitsivitsy azonao atao ihany koa: afaka manandrana ny tontolo iainana misy ianao, manamboatra ny fanandramanao manokana, na mamorona ny vokatrao manokana ho an'ny fanandramana miverimberina. Araka ny hitanao amin'ireo ohatra etsy ambany, tsy misy amin'ireo fomba ireo no tsara indrindra amin'ny toe-javatra rehetra, ary tsara indrindra ny mieritreritra azy ireo toy ny manolotra varotra amin'ny lafiny efatra lehibe: ny vola, ny fanaraha-maso, ny zava-misy ary ny etika (4.12).
Figure 4.12: Famintinana ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fomba samihafa izay ahafahanao manao ny fanandramanao mitranga. Ny vidim-piditro dia midika ho fandaniana amin'ny mpikaroka amin'ny fotoana sy vola. Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso dia midika izany fahafahako manao izay tadiavinao amin'ny famerenana ny mpandray anjara, famandrihan-toerana, fanafarana fitsaboana, ary ny famoahana ny vokatra. Amin'ny alalan'ny zava-misy dia midika hoe ny habetsaky ny fanapahan-kevitra momba ny tontolo iainana dia mifanandrify amin'ireo olona nihaona tamin'ny fiainana andavanandro; Mariho fa ny tena zava-misy dia tsy zava-dehibe foana amin'ny fanandramana ny teoria (Falk and Heckman 2009) . Amin'ny etika dia midika fa ny fahafahan'ny mpikaroka mandaitra amin'ny fitantanana ireo olana ara-pihetseham-po mety hitranga.